“Atsi-Mözika”: hanandratana ireo mpanakanto any Atsimo | NewsMada
“Atsi-Mözika”: hanandratana ireo mpanakanto any Atsimo
Faritra manan-karena olona manan-talenta, indrindra eo amin’ny tontolon’ny mozika, ny ao Atsimon’ny Nosy. Tsy vitsy izy ireo ny lasa lavitra sy nitondra avo ny voninahi-pirenena, hatrany ivelany any. Singanina manokana, ohatra, ry Régis Gizavo, Théo Rakotovao, ny tarika Njava, izay samy efa nandrombaka loka maro tamina fifaninanana goavana sy iraisam-pirenena. Tsy zovina amin’ireo andrarezin’ny mozika, any ivelany any, izy ireo ary tsy mitsanga-menatra manoloana ny toa azy.
Amin’izao fotoana izao, misy ny fandaharanasa hoenti-manamafy izay talenta matevina ananan’ireo mpanakanto avy ao Atsimon’ny Nosy ireo. “Atsi-Mözika” ny lohahevitra. Tafiditra ao anatin’ity fandaharanasa ity ny fanofanana solofo dimbin’ny ala eo amin’ny tontolon’ny mozika, ao Toliara ao.
Hanomboka ny 13 febroary izao ny fiofanana, hotanterahina ao amin’ny Vakok’Arts Trano. Miisa 20 ny mpanakanto avy ao an-toerana hisitraka ny fampianarana, miaraka amin’ireo zokiny efa kalaza, toa an-dry Miiary Lepiera, Maximin Njava ary i Monika Njava. Karazana “résidence de création” na fivahiniana arahina famokarana no hatrehin’izy ireo. Araka izany, aorian’ny fiofanana, haharitra sivy andro, hisy ny fampisehoana goavana handraisan’ny mpiofanana tsirairay anjara.
Araka izany, ny 23 febroary no hanatanterahana io fiofanana io, ao amin’ny Vakok’Arts Trano ihany. Hitohy amin’ny fitetezam-paritra manerana ny Nosy ny fandaharanasa. Manohana ity hetsika ity ny tahiry iombonana ho an’ny fiarahamonim-pirenena sy ny Alliance française ao Toliara.